Itoobiya oo kala xulaneysa Dekadaha Berbera iyo Dooraale - Awdinle Online
Itoobiya oo kala xulaneysa Dekadaha Berbera iyo Dooraale
Tartanka Bariga Afrika ee dhanka wax lasoo degista & dhoofinta ayaa sii kordhay, waxaana laf dhabar u ah Dowladda Itoobiya oo aan lahayn Deked isla markaana ay degen yihiin dad aad u badan.
Itoobiya ayaa indha-indheyn ku heysa fursadda maalgashiga Dekedaha Berbera Somaliland oo aan aqoonsi Madax bannaani ah ka heysan Soomaaliya & Dooraale oo Jabuuti ah Jabuuti ah oo haatan xiriir wax dejinta & rarista ah ka dhaxeeyo.
Dooraaleh waxaa laga soo eryay Shirkadda Dekedaha maamusha ee Dubai (DP World), kadib markii ay ku guul-dareysatay ballamo ay la gashay Dowladda Jabuuti ah oo dhanka horumarinta Marsada.
Waxa ay u xeed-xeedatay maamulka Dekedda Berbera, inkasta oo aysan wax muuqda ka qaban, haddana waxaa socda dedaal xooggan oo ay ku bilaabeyso mashruuc lagu habeynayo Bisha Mach 2021.
Muuse Biixi oo tegay qayb kamid ah laamiga la dhisay ee Berbera
Somaliland, DP World & Itoobiya waxa ay bilaabeen dhismaha Waddo isku xireysa Berbera & Wajaale si loogu sii gudbiyo ismaamulka Soomaalida (Soomaali Galbeed) si jid wanaagsan loogu helo safarka Marsadaas.
Mashruuca waddada loo dhisayo Berbera ilaa Dhulka Soomaalida itoobiya heysato.
Itoobiya & Imaaraatka Berbera heshiiska lagula galay maamulkeeda 30-sano waxaa ka dhaxeeya is faham, waayo Shirkadda DP World waxa ay daneyneysaa in dhaqaale badan uu kusoo xirmo Dekedda.
Previous articleCiidanka Haramcad oo la wareegay Ammaanka Matabaan
Next articleNin hubeysan oo rasaas ku furay dad banaanbax ka dhigayay Muqdisho